Influ2: Sehatra fanaovana dokambarotra mifototra amin'ny kaonty miorina amin'ny olona (ABM) | Martech Zone
kaonty aza mandray fanapahan-kevitra, olona do. Marketing mahomby amin'ny kaonty (ABM) Ny programa dia manaraka ny kaonty amin'ny sehatra stratejika fa miresaka amin'ny olona amin'ny ambaratonga fanatanterahana. Influ2 dia mamaritra azy io ho programa ABM misy vahaolana avo lenta izay ahitana ireo fiasa fototra:
Mandrosoa ho an'ny vondrona mpividy. Mihoatra lavitra ny fisafidianana ireo kaonty lasibatra: mpanapa-kevitra manokana momba ny fanapahan-kevitra izay misy vondrona mividy ny kaonty kendrenao. Jereo ny famaritana persona an'ny ICP anao hanangonana lisitr'ireo mpanapa-kevitra tianao harahina ao amin'ny programa ABM avo lenta.
Fandefasan-kafatra manokana. Ny fahaizana miresaka amin'ny olona manokana dia mitondra ny toetranao any amin'ny sehatra manaraka. Ny mpitantana zandriny dia tsy mitovy amin'ny an'ny tompon'andraikitra amin'ny ambaratonga C. Ampiharo ny fiteny mety mba handefasana hafatra mifandraika amin'ny personas samihafa.
Mampiasà fantsom-pifandraisana mifototra amin'ny olona. Fitaovana fampiroboroboana ny varotra miorina amin'ny kaonty toa ny Outreach na Salesloft no nanolo ny fanentanana varotra mailaka nokendrena hanan-danja tokoa. Ny Influ2 dia novolavolaina mba hampiorina ny doka amin'ny sehatra iray ihany.
Dia lavitra an'ny mpanjifa. Mampiasà famantarana fampiroboroboana olona hananganana dian-dehilahy marobe. Ny fikitihana dokam-barotra dia mety hiteraka mailaka misy rohy hampidinana ilay tatitra. Ny olona iray liana mandrakariva amin'ny lohahevitra manokana dia azo ampiana amin'ny fampielezan-kevitra momba an'io lohahevitra io. Ny olona nanatrika webinar dia afaka mahazo doka aorian'ny mpanatrika. Azonao atao ny mieritreritra dia an'arivony maro-maro izay azo vohana amin'ny fomba ABM avo lenta.
Influ2: Doka miankina amin'ny olona sy ABM
Influ2 dia sehatra marketing ho an'ny mpivarotra B2B, ary miresaka ny tsy fitovian'ny orkestra ifotony eo amin'ny hetsika fanaovana dokambarotra sy ny varotra. Manolotra marketing amin'ny atiny mahomby izy io, ary koa mamorona fifandraisana misy dikany amin'ny mpanjifa izay miteraka fifampiraharahana mihidy.
miaraka Influ2 ny dingana tsirairay amin'ny dian'ny mpanjifa (manomboka amin'ny fanentanana ny marika any an-tampon'ny làlan-drivotra sy ny dingana famokarana ny fangatahana hatramin'ny fivarotana sy ny fitazonana ny mpanjifa) dia nohamafisin'ny dokambarotra kendrena manokana. Miaraka amin'ny Influ2, ny orinasa dia afaka:
Mikendry ny mpanapa-kevitra voafidy - mifidiana olona mifandraika ao anaty kaonty kendrena hahita ny doka nataonao. Ampifandraiso ny CRM na rindrambaiko automatique marketing anao hampifandray ny lasibatrao amin'ny varotrao na ny fantsom-barotra. Ny Influ2 dia manolotra fampidirana amin'ireo CRM lehibe rehetra sy rindrambaiko mandeha ho azy amin'ny marketing, toy ny Salesforce, HubSpot, Marketo, Outreach, sns.
Manokana ho an'ny Personas mpividy - Mamorona hafatra vitsivitsy hafa ho an'ny personas samihafa ao anatin'ny kaonty iray. Ataovy izay hifandraisany amin'ny asan'ny olona na ny faritra iandraiketany. Tsy hiresaka amin'ny marketing marketing VP mitovy amin'ny fomba fitenenanao amin'ny talen'ny HR ianao, koa maninona no asehonao azy ireo ny doka mitovy amin'izany?
Araho ny fidirana amin'ny doka tsirairay - Ny fiheverana rehetra, ny tsindrio, ny fitsidihana ary / na ny firotsahana dia marika famantarana izany. Ny Influ2 dia ahafahanao manara-maso azy rehetra mianadahy. Ampiasao ity angona ity mba hanaovana laharam-pahamehana mba hahazoana fahatakarana tsara kokoa momba ny fampandraisana anjara ny hafatrao amin'ny kaonty iray sy ny olona ao amin'ity kaonty ity.
Fantaro ny tanjona kendren'ny varotra amin'ny isa amin'ny fitondran-tena - Ny isa amin'ny fitondran-tena dia mamela anao hampahafantatra ireo vina sy kaonty vonona amin'ny varotra izay tsy ho hitanao raha tsy izany. Ny Influ2 dia mandrefy ny fiantraikan'ny doka-nao amin'ny olona kendrenao ary hamadika azy ho isa kendrena mba hahafahanao mamantatra mora foana ireo torolàlana mahay miaraka amin'ny laharam-pahamehana indrindra. Raha tsindrio indroa ilay dokam-barotrao, dia mandany 120 segondra eo amin'ny pejin-tranonao ary miverina in-droa ao amin'ny tranonkalanao ao anatin'ny herinandro, izany dia famantarana lehibe fa liana sy vonona hiresaka ilay olona. Ny Influ2 dia manara-maso ireo fampiroboroboana rehetra ireo ary mandika izany amin'ny isa fitondran-tena mba hahafahan'ny ekipa mpivarotra sy ny varotra anao mihetsika amin'izy ireo.
Ny dokam-barotra miankina amin'ny olona dia manampy antsika amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny mpanapa-kevitra marina B2B dia efa tratra alohan'ny fifanakalozana varotra, izay mitarika fahombiazana azo refesina amin'ny fampitomboana ny tahan'ny valin'ny ezaka amin'ny varotra ivelany.
Stephen Ngo, mpitantana fitomboan'ny nomerika, Profitwell
Influ2 miasa manerana ny haino aman-jery lehibe rehetra, ao anatin'izany ny Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo, ary Google Ads.
Tranga fampiasana DISCO
Nofoanana ireo hetsiky ny olona ary tsy nihetsika ny nomeraon-telefaona noho ny areti-mandringana, ny mpitarika ny teknolojia ara-dalàna Disco sahirana hahatratra ny mpihaino tadiavin'izy ireo - mpisolovava sy sampan-draharaha ara-dalàna momba ny orinasa - ary hanao tatitra ny firotsahan'ny doka.
Ny paikady marketing ho an'ny olona vaovao natombok'i Influ2 dia nahatonga ny DISCO handresy an'io ary hahazo eo imason'ny mety ho mpanjifa rehefa mifamofo izy ireo. Teo anelanelan'ny volana septambra 2020 ka hatramin'ny martsa 2021, DISCO dia afaka nahatratra tanjona mihoatra ny 30,000 tamin'ny kaonty 24,000. Ny fiheverana 548,805 794 dia niteraka tsindry 497, fitsidihana 2,000 ary nitondra fotoana 2 niaraka tamin'ny mpanapa-kevitra. Nampifandraisin'ny DISCO koa ny Salesforce miaraka amin'ny sehatra InfluXNUMX ka ny varotra dia nandeha hatrany amin'ny varotra.
Fandaharam-potoana Demo Influ2
Tags: abmvarotra miorina amin'ny kaontylasibatra dokafacebook adsdoka googledokam-barotra googleinflu2doka mifandraypersonaolona kendrenapersonalizationsalesforcedoka amin'ny twitterdoka yahoo